डिसेम्बर १ मा अष्ट्रेलियाको सिमाना नखुल्ने । विद्यार्थी अब कहिले आउन पाउलान् ? « Nepal Tube Australia
गृहपृष्ठ » Australia » डिसेम्बर १ मा अष्ट्रेलियाको सिमाना नखुल्ने । विद्यार्थी अब कहिले आउन पाउलान् ?
डिसेम्बर १ मा अष्ट्रेलियाको सिमाना नखुल्ने । विद्यार्थी अब कहिले आउन पाउलान् ?
सिड्नी, डिसेम्बर १ तारिखमा अष्ट्रेलियाले विद्यार्थी लगायत २८ वटा भिषाधारीका लागि खुल्ला गर्न लागेको सिमाना तत्काल नखुल्ने भएको छ ।
ओमिक्रोन भन्ने कोरोनाको नयाँ प्रजाति भेटिएपछि सावधानी अपनाउन भन्दै अष्ट्रेलियाले तत्काललाई सिमाना नखुल्ने जनाएको छ । सोमबार अबेर आपतकालिन रुपमा बसेको राष्ट्रिय मन्त्रीपरिषद र राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकले आगामी १५ डिसेम्बरसम्म सिमाना नखोल्ने निर्णय गरेको हो ।
नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरसको बारे यथेष्ट जानकारीहरु उपलब्ध भइनसकेकाले तत्कालै जोखिम लिन नसकिने आकलन गरेर सिमा नखोल्ने निर्णय गरिएको हो । अष्ट्रेलियाको प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी पल केलीको सुझाव अनुसार सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । दुइ हप्ताको समयमा यस भाइरसको प्रभाव, खोपको असर मुल्यांकन गरेर निर्णय लिने बताइएको छ । यसबिचमा पनि पुरा खोप लगाएका नागरिक, पिआरधारी तथा उनीहरुको नजिकको परिवारका सदस्यहरु भने आउन पाउनेछन् ।
क्याटेगोरी : Australia, Breaking News, Breaking News, Entertainment, International, News